Suuqgeynta Fashilmay: Markuu Tech waxyeello ka badan wanaagga | Martech Zone
Jimco, Nofeembar 22, 2013 Jimco, Nofeembar 22, 2013 Douglas Karr
Markii aan la shaqeyneyno macaamiisha, waxaan inta badan ogeysiinnaa inaan weli ku jirno galbeedka duurjoogta ah ee suuqgeynta qadka… kuwani waa weli maalmo yar, wax walbana weli lama isku deyin. Laakiin taasi micnaheedu maahan inaan wali wax ka baran karin qaladaadka dadka kale.
Iyada oo tiknoolajiyada cusubi soo baxaan ku dhowaad maalin kasta, waxay u baahan tahay xirfadle suuq-geyn khibrad leh oo aqoon leh inuu ogaado sida looga faa'iideysto kartida suuq-geynta tikniyoolajiyadda cusub uguna beddelo guusha iibka. Halkan, waxaan ku ogaaneynaa suuqgeynta ugu sareysa inay guul darreysato, oo muujineysa wixii khaldamay iyo sida aad uga fogaan karto sameynta qalad isku mid ah. Matoorada Lattice
Tani waa soo noqnoqoshada qaar ka mid ah khaladaadka caadiga ah ee shirkadaha ay sameeyaan. Waxaan si buuxda u qirayaa inaan inta badan khaladaad nuxur leh haysto. Aniguna waxaan ku dari lahaa inaan wali arkin codsi weyn oo ah QR Codes ka baxsan Google Glass (oo aan lahayn eray eray fure ah). Waa fekerkeyga inay yihiin guuldarro dhan walba ah madaama aysan ku biirin calaamadeynta isla markaana aysan u aheyn xusuus sida wax la mid ah dariiqa URL.
Ka hel iib iibsi iyo macluumaad suuq ah Hub Aqoonta Lattice.
Tags: qalabayntaContent Suuqemaylka wuu fashilmayku guuldareysatoguuldareysigahashtaghashtag guuldareystootomaatiga suuq geyntasuuq geyntasuuq xumidaFiidiyowyada SuuqgeyntaQR Codeqr code wuu guuldareystaybartilmaameedku wuu fashilmayvideo guuldaraystay
Maxay Tahay Inay Meheraddaadu Noqo Mid Diyaar U Ah-Ciidaha